Jehovah Adasefo​—Hɛn Nhyiamu Etsitsir Ahorow | JW.ORG
Wɔkaa hɔn a wɔbaa nhyiamu no ase no nyinara dɛ wɔnkɔ do nda ahobrɛadze edzi, na wɔmma Jehovah no nsusui ntsim wɔ hɔn akoma mu.
Nhyiamu Ma Hɔn A Woewie Ɔweɔn-Aban Gilead Bible Skuul A Ɔtɔ Do 133 No
Nyimpa eduanan awɔtwe a wofifi wiadze n’afã ahorow nyina ewie abosoom enum skuul bi a wɔdze sũa Bible no kɔ ekyir. Kenkan nhyiamu a wɔyɛɛ maa hɔn no ho nsɛntsitsir.
Nhyiamu Ma Hɔn A Woewie Gilead A Ɔtɔ Do 136 Ho Nsɛntsitsir
Wɔ nhyiamu a wɔyɛɛ maa hɔn a woewie Gilead no ase no, wɔmaa ɔkasa ahorow, wobisabisaa hɔn a woruwie skuul no nsɛm, na wɔyɛɛ asɛnka mu osuahu ho ɔyɛkyerɛ ahorow.
Afrenhyia Nhyiamu Ho Amandzɛɛbɔ​—October 2013
Aber a wɔyɛɛ afrenhyia nhyiamu a ɔtɔ do 129 no, etsiefo a hɔn dodow bor ɔpepem 1.4 na wohyiahyiaa mu tsiee bi wɔ aman 31 do. Wɔ nhyiamu no ase no, woyii Borɔfo New World Translation of the Holy Scriptures fofor no edzi.
Hwɛ dɛm nhyiamu soronko yi a ɔyɛ enyigye a wotwae kɔr mbea 1,830 wɔ wiadze nyina no ho nsɛntsitsir.
Nhyiamu Ma Hɔn A Woewie Ɔweɔn-Aban Gilead Bible Skuul A Ɔtɔ Do 135 No
Nyimpa bɔbor 10,000 na wɔkɔr dɛm nhyiamu a ɔyɛ enyigye na ɔkã akoma a wɔyɛɛ no September 14, 2013 no bi. Hwɛ dwumadzi no mu nsɛntsitsir a ɔyɛ enyigye no.
Nhyiamu Ma Hɔn A Woewie Gilead A Ɔtɔ Do 135 Ho Nsɛntsitsir
Jehovah Adasefo dze dɛm Bible skuul yi tsetse hɔn asomfo a hɔnho akokwaa no ma hɔnho wea wɔ ɔsom edwuma no mu.
Nhyiamu Ma Hɔn A Woewie Gilead A Ɔtɔ Do 134 Ho Nsɛntsitsir
Mfe 70 nye yi na wɔdze dɛm skuul a ɔyɛ soronko yi atsetse asɛmpatserɛwfo. Hwɛ nhyiamu a wɔyɛe maa hɔn a wowiee skuul no ho nsɛntsitsir.
Nhyiamu Ma Hɔn A Woewie Ɔweɔn-Aban Gilead Bible Skuul A Ɔtɔ Do 134 No
Wɔyɛɛ nhyiamu March 9, 2013 maa hɔn a wowiee Ɔweɔn-Aban Gilead Bible Skuul a ɔtɔ do 134 no. Dwumadzi no twee adwen sii mfaso a skuul no dze aba no do, ofitsi aber a wɔtseew skuul no wɔ mfe 70 a abɛsen kɔ mu no.
Ebɛn nhyehyɛɛ na wɔdze guu akwan mu ma ɔmaa nyimpa bɔbor ɔpepem 1.4 a wofi aman 31 do kɔr dɛm ehyiadzi soronko yi bi?
Video Tsiabaa: Nsɛm A Wobisabisa—Gilead Skuul A Ɔtɔ Do 133
Hwɛ video a ɔfa nsɛm a wobisabisaa skuulfo a wɔkɔr Gilead a ɔtɔ do 133 no hɔn mu beenu ho.
Video Tsiabaa: Afrenhyia Nhyiamu Dwumadzi—October 2012
Nyimpa pii a wofi aman ahorow mu hyiaa mu wɔ afrenhyia nhyiamu a otsĩa 128 a Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania yɛe no ase.
Video Tsiabaa: Nhyiamu Dwumadzi—Gilead Skuul A Ɔtɔ Do 133
Hwɛ nhyiamu a ɔyɛ enyigye a wɔyɛe maa hɔn a woewie Gilead Skuul a ɔtɔ do 133 no mu nsɛntsitsir.
Esuafo no wiee skuul no wɔ March 14, 2015. Wɔhyɛɛ hɔn a wɔbae no nyina nkuran dɛ wɔnkɔ do nsũa Jehovah Nyankopɔn ho adze na wonsũasua Jesus Christ no nhwɛdo no.
Nhyiamu Ma Hɔn A Woewie Gilead A Ɔtɔ Do 138 Ho Nsɛntsitsir
Wɔ nhyiamu yi ase no, wɔtoow Ahendzi ndwom afofor paa anan, na wosii dza ɔsɛ dɛ hɔn a woewie skuul no dze hɔn ntsetsee nye ho kwan ahorow no yɛ no do dua.
2014 Amanaman Ntamu Ehyiadzi—Jehovah Adasefo Dzi Kan Hwehwɛ Nyankopɔn N’ahenman No
Hwɛ mbrɛ wiadze nyina enuanom bi behyia mu na wosũa Nyankopɔn n’Ahenman no ho adze.
Ɔdɔ Kã Hɛn Bɔ Mu—Ehyiadzi Bi Wɔ Frankfurt, Germany
Nkorɔfo mpempem pii a ɔsosor hɔn amambra na wofifi aman ahorow do ebehyia mu wɔ asomdwee mu.
Atlanta Gyee Jehovah Adasefo Fɛw Do
Atlanta kurow mu hɔ mpanyimfo no gyee ehyiadzifo a wofifi aman ahorow bɔbor 28 do no fɛw do, baa ehyiadzi akɛse ebiasa bi a wɔyɛe wɔ July nye August 2014 mu no, na wɔkamfoo hɔn.
Ofitsi afe 1943 mu no, Gilead Skuul no atsetse hɔn a wɔwɔ ɔpɛ no ma woenyin wɔ hɔn nokwar nyimdzee a wɔwɔ wɔ Nyankopɔn mu no mu. Hwɛ nhyiamu a wɔyɛe aber a esuafo no wiee skuul no no mu nsɛntsitsir.
Afrenhyia Nhyiamu Nsɛntsitsir—October 2014
Ahɔho mpempem pii baa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania afrenhyia nhyiamu a ɔtɔ do 130 no ase. Hwɛ dɛm nhyiamu tsitsir yi a wɔdze dzii Ahendzi no a oedzi tum mfe 100 no afahyɛ no mu nsɛntsitsir.
Jehovah Adasefo Akwankyerɛ Kuw no mufo kɛseraa Russia nye Ukraine, na wɔhyɛɛ hɔn mfɛfo Adasefo a amanyɛsɛm mu basabasayɛ akã hɔn no dzen.